Ukudla ngemuva kokuhlaselwa yisifo sikashukela > Ukudla ngesifo sikashukela
Imiphumela yokuhlaselwa yisifo sikashukela, ukudla ngemuva kokuhlaselwa
I-Stroke ingenye yezinkinga ezinkulu zesifo sikashukela. Lokhu kungukuphulwa kokujikeleza kwenhliziyo, okuqina kakhulu okuholela ekulahlekelweni yikhono lomuntu lokuhamba nokukhuluma njengokujwayelekile. Ezimweni ezinzima kakhulu, lesi sifo sibangela ukufa noma ukukhubazeka okuphelele.
Abashukela kufanele bazi! Ushukela yinto ejwayelekile kuwo wonke umuntu. Kwanele ukuthatha amaphilisi amabili nsuku zonke ngaphambi kokudla ... Imininingwane eminingi >>
Ngokuhlaselwa yisifo sikashukela nesifo sikashukela, ukudla kungenye yezinto ezibalulekile zokwelashwa okuphelele. Ngaphandle komsoco ofanele, ukubuyisela isiguli nokugcina isimo sakhe sempilo esijwayelekile akunakwenzeka.
Isikhathi sokululama ngemuva kokushaywa unhlangothi sisigaba esinzima empilweni yesifo sikashukela. Njengomthetho, kuhlala isikhathi eside impela, ngakho-ke inhlangano yokudla okunokulinganisela ibaluleke kakhulu ezigulini ezinjalo. Nazi izimiso eziyisisekelo okufanele uzilandele lapho wenza imenyu yomuntu odinga ukunakekelwa kokuvuselelwa:
izitsha kufanele zivumelane ngendlela efanayo ukuze kube lula ukugwinya (uma isiguli sidla ngohlolisiso, ukudla kudinga ukwenziwa ngoketshezi futhi kusikwe nge-blender noma nge-grinder yenyama),
lokushisa Ukudla kufanele kube ngokulinganisela afudumele, hhayi ashisayo, noma ezibandayo,
kungcono ukupheka ukudla okusha nsuku zonke - lokhu kunciphisa amathuba okutheleleka kwamathumbu nobuthi,
udinga ukunciphisa usawoti ekudleni ngangokunokwenzeka, noshukela nemikhiqizo ekuqukethe kufanele yenqatshelwe ngokuphelele,
imikhiqizo ephuma lapho izitsha olungiselelwe, kumele izinga okusezingeni futhi mahhala izingxenye eziyingozi.
On ukudayiswa ungathola ingxube ekhethekile kwezakhi for iziguli emva unhlangothi, okuyinto by Isifaniso yesidlo zezingane, uzilungiselele kusuka izimpushana ezomile futhi asidingi ukupheka. Ngakolunye uhlangothi, ukusetshenziswa kwabo kulula kakhulu, ngoba kwanele ukuthulula i-powder ngamanzi abilayo futhi uvuse. Ngaphezu kwalokho, ukungaguquguquki kwengxube eqediwe kungamanzi ngokuphelele, okunomphumela omuhle wokutholwa. Imikhiqizo enjalo iqukethe zonke izinto ezidingekayo zokulandela umkhondo, amavithamini kanye nezakhi zomzimba ezidingekayo esigulini. Kepha, ngakolunye uhlangothi, kude nabo bonke kufanelekile abanesifo sikashukela ngenxa yokuqukethwe kashukela nobisi, ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa umkhiqizo onjalo, kuyadingeka ukubonana nodokotela we-endocrinologist.
Ukuqunjelwa kwe-Banal kungaba yingozi kakhulu ezimweni zengozi ye-cerebrovascular. Kakhulu push futhi ngokweqile ngesikhathi sokuzikhulula ngakho ogulayo, akufanele, ngoba kungaholela yokuhlasela okuphindaphindiwe, noma nokwanda okuphawulekayo blood pressure. Ukuthula phezu lolu daba olubucayi kungaholela nemiphumela ebuhlungu, ngakho-ke kubalulekile ngokushesha ukusungula emathunjini bese ulandela bethulula yalo evamile.
I-Porridge ingumthombo wama-carbohydrate ahamba kancane anikeza umzimba amandla adingekayo futhi isikhathi eside inikeza umuzwa wokuphefumula. Ukuze ezigulini eziye unhlangothi sikashukela, ewusizo labo okusanhlamvu ukuthi abe ongaphakeme noma naphakathi Inkomba glycemic. Lokhu kufaka i-buckwheat, ukolweni, i-oats yemvelo, i-bulgur nelayisi elinsundu. Ekuqaleni, inkathi yokutakula kangcono okuphekiwe wokudla gaya, ukuze isiguli azange abe nezinkinga singagwinyi.
Kuyinto engathandeki ukudla izitsha ezinjalo zepuni, ilayisi emhlophe ne-semolina. I-pea porridge icasisa ukwakheka kwegesi futhi inciphise inqubo yokuhamba kwamathumbu, bese kuphuma irayisi ne-semolina kuhlu olusheshayo lwamakhilogremu angeziwe kanye nokwanda okukhulu koshukela wegazi. Akunakwenzeka ukupheka iphalishi ubisi (ngisho okusanhlamvu ewusizo kuvunyelwe), njengoba kwandisa umthamo carbohydrate ukubunjwa ukudla kwenza kube ngokuphelele ekudleni.
Njengoba imifino kakhulu ephansi Inkomba glycemic futhi ewusizo Ukwakheka kwamakhemikhali, kufanele yisisekelo abagulayo umuntu imenyu. Lapho ukhetha indlela yokupheka, kungcono ukunikeza ukukhetha ekuphekeni nasekushiseni. Labo imifino edliwayo engaphekiwe, kumele kutsho futhi ifakwe ekudleni lesiguli ngesimo puree.
Imifino - isidlo omuhle eceleni ukuze inyama, abazi zibangele umuzwa wobukhulu, futhi kubangele ukumuncwa kangcono amaprotheni.
Imifino efanelekile yeziguli esikhathini sokuvuselelwa ngemuva kokuhlaselwa yisifo sikashukela yilena:
Iklabishi namazambane ezigulini ezinjalo akungqubuzani ukudla, badinga kuphela ukuqapha eduze inombolo yabo ekudleni futhi ukuqapha ukusabela nesineke. Amazambane aqukethe eningi isitashi, okungase kwandise izinga lamanzi igazi glucose, bese Kale ngokuvamile kubangela ukuvuvukala futhi amajaqamba emathunjini.
I-anyanisi nesweli kungaba indawo kasawoti nokuthosa, okungafuneki ezigulini ezinjalo. Ziqukethe izinto eziwusizo ezithambisa igazi futhi zihlanze imithambo yegazi yama-cholesterol deposits. Ngemithamo ngokulinganisela incumbe yalezi imifino, ukungezwa iphalishi noma inyama, ngeke ukulimaza nesineke, futhi kancane ezihlukahlukene ukunambitha uhlobo olufanayo ukudla. Kodwa uma isiguli izifo concomitant ukuvuvukala wokugaya ukudla, bese ukudla okunjalo okunoshukela kumelwe siqaphele.
Ukusuka kwenyama kungcono ukukhetha izinhlobo ezinamafutha aphansi njenge-turkey, inkukhu, i-veal nenyama yenkomo. Kulezi, ungapheka ama-broths emanzini wesibili bese uwasebenzisela ukwenza isobho elibunjiwe. Ukupheka, izifundo zokuqala nezesibili, kungcono ukhethe i-fillet, awukwazi ukupheka umhluzi emathanjeni. Ukudla okunamafutha ezigulini ezinesifo sikashukela, ikakhulukazi ngemuva kokushaywa unhlangothi, akuvunyelwe ngokuphelele.
Awukwazi ukuthosa inyama, kungcono ukuyibhaka noma ubambe, upheke nesitshulu. Kusukela pre-okuphekwe nengulube zingenziwa meatballs alinalutho noma meatballs, okuyinto, ngemuva ukupheka kwanele lula nakakhulu ukuxoxa nabo-plug futhi ayidingi ukugaya ezengeziwe. Kuyelulekwa ukuhlanganisa inyama nemifino elula noma okusanhlamvu, ukuze kube lula ukugaya futhi kusheshe ukugaya.
Lapho ekhetha inhlanzi, kubalulekile ukuba banake freshness yayo kanye oiliness. Fresh and low-fat fish, steamed - ke ukhetho best for iziguli unhlangothi nge ngifundise ngesifo sikashukela. Noma yimuphi izinhlanzi ezomisiwe, okuthosiwe futhi anosawoti (ngisho osasitini) asivunyelwe ukusebenzisa lesi sigaba iziguli.
Imikhawulo yokudla kweziguli ihlobene ikakhulu noshukela nosawoti. carbohydrate elula kukhona ngisho nelimazayo sikashukela ngaphandle yezinkinga, futhi ukwephula kwegazi cerebral, bangakwazi ukonakala sina futhi okungazelelwe isimo lesiguli zempilo. Ushukela kanye nemikhiqizo equkethe ke, ingqondo iyehla iyenyuka elibukhali namazinga kashukela egazini igazi, okuyinto Uphatha kabi imithambo yegazi. ngaphakathi kwezindonga zabo ababhekene izinguquko ubuhlungu, ngenxa bacasuka liningi igazi eliphelele kwezitho ezibalulekile, eduze kwayo ukuthi akuphi.
Salt azigcina amanzi emzimbeni, ngakho isiguli ingaqala ukuvuvukala. Ngaphezu kwalokho, ukudla okunosawoti kwandisa ingozi yomfutho ophakeme wegazi (ingcindezi aphakeme). Zombili lezi zimo ziyingozi kakhulu umuntu washaywa unhlangothi. Kungakho ukulawula inani likasawoti elichithwe kubaluleke kakhulu. Inani eliphezulu elivumelekile lesiguli ngasinye lingabalwa udokotela kuphela, unikezwe ubunzima besifo nama-pathologies ahambisanayo. Esikhundleni sikasawoti, ukuthuthukisa ukutholakala kokudla, kungcono ukusebenzisa izithako ezinobunono nemifino ebunjiwe.
Imikhiqizo elandelayo ivinjelwe abanesifo sikashukela abaye bahlaselwa unhlangothi:
wonke amaswidi noshukela
ayi, ngibhema futhi anosawoti inhlanzi,
izinongo ezinuka kamnandi
izithelo eziphakeme kakhulu ze-glycemic index
ama-chips kanye nokudla okufana nakho
Kubalulekile ukuthi iziguli esikhathini sokululama zibheke ukudla futhi zingavumeli isikhathi sekhefu sokudla. Uma isiguli siba nezinkinga zokukhuluma ngemuva kokushaywa unhlangothi, futhi siqambe amanga, khona-ke kuba nzima kuye ukuthi sibike indlala yaso. Ngakho-ke, izindaba ezinjalo zivame ukuphathwa yizihlobo noma abasebenzi abakhethekile abanesifo sikashukela. Akufanele sibakhohlwe mayelana nesilinganiso evamile ye amazinga kashukela egazini, ngoba Hyperglycemia (futhi kahle kungakhuphula izinga likashukela) ayingozi kakhulu ukuze isiguli ngemva kokushaywa unhlangothi. Siyabonga ukuhlela kahle ukudla kungaba kancane eziyinkimbinkimbi ukuze lula kwesikhathi yokutakula futhi kuncishiswe ingozi yezinye izinkinga zesifo sikashukela.
Stroke - i-acute disorder kwegazi ebuchosheni, okuyinto kuhambisana nokulahlekelwa okungazelelwe ukwazi nokukhubazeka. Kuye izimbangela izinhlobo ezintathu zokugula ochwepheshe esabiwe. Lesi yisifo sohlangothi lwe-ischemic (izimpawu ze-neurological predominate), i-hemorrhagic (i-vascular rupture, okucasulayo i-hemorrhage) kanye ne-subarachnoid hemorrhage (ukulimala kwezindawo eziphakathi kwamalunga).
I ngaphambili futhi waqala ukwelashwa usizo lokuqala zizonikezwa, amathuba kancane izinkinga. Ngakho-ke thina awanakuziziba engcupheni ayezosenza sikashukela nomkhaya wakhe ulungiselela kungenzeka inkinga izimo.
Izimbangela zokugwazwa kwesifo sikashukela
Acute cerebral ukugeleza kwegazi ebonwe abanesifo sikashukela, ngokwesilinganiso izikhathi 6 kaningi iziguli ngaphandle iziyaluyalu glucose umzimba. Lokhu kusungulwa ngumonakalo odongeni lwe-vascular lwazo zonke izinhlobo zemithambo yemithambo yegazi:
enkulu - kwakhiwa zingcwecwe atherosclerotic overlying ukusakaza igazi,
intracranial (phakathi) - kuncishiswe ngemuva kwesizinda sokucindezela okukhulu (spasm),
omncane - encishisiwe permeability ngenxa ukuqina ulwelwesi kwangaphakathi.
Kulezi zinto ezingeziwe ezenza ukonakala kwegazi kube nzima:
amapuleti anamathela ndawonye futhi anamathele odongeni lwe-vascular,
umsebenzi wezinto ezihlanganayo uyanda futhi uzwela kuma-anticoagulants uyancipha,
ushukela ophakeme kanye ne-cholesterol.
Ngakho, sikashukela has womathathu izizathu kakhulu kubalulekile occlusion semithambo: odongeni ezilimele, behlisa ukugeleza kwegazi, igazi obukhulu. Zithuthukiswa ukuphazamiseka kwe-metabolic:
ukuntuleka njalo kwe-oksijini ezicutshini zobuchopho,
ukumelana ne-insulin (ukuntuleka kokuphendula i-insulin ngohlobo 2 lwesifo),
ukunqwabelana kwamakhompiyutha anobuthi,
ukwakhiwa kwama-free radicals.
Zonke zidala izimo ezingezinhle zomsebenzi wamangqamuzana obuchopho. disorder Sokujikeleza kuvele kukhona ku isizinda iziyaluyalu ezivamile umzimba, encishisiwe ukugeleza kwegazi. Lokhu kudala ubunzima besifo esithile, ukuphazamiseka okukhulu kwemizwa. Ukubuyiselwa isikhathi eside futhi kaningi akugcwele.
Futhi nakhu okunye mayelana nokukhubazeka kwesifo sikashukela.
Izinhlobo ze-pathology nezimpawu zazo
Ngokushaywa unhlangothi, ukugeleza kwegazi kuye kumaseli wobuchopho kuyancipha, bese beyeka umsebenzi wabo. Lokhu kungenxa yokuqhamuka (ischemia) noma ukuqhuma komthambo (hemorrhage). Abanesifo sikashukela, ukuhlukumezeka umbono oqavile kuyinto ischemic, kodwa imvamisa ezophayo (oluhambisana) kufanele ku ephakeme isilinganiso kuka emphakathini.
Ngo-90% eziguli abonise izitsha ezidlulanayo palsy, acute ekunqanyulweni kwamaseli amandla. Isizathu salokhu:
ingcindezi ephezulu nokufa okugxile kwezicubu zobuchopho ngokuvela kwethambo elincanyana - i-lacunae,
ukuphazamiseka kwesigqi senhliziyo (ikakhulukazi i-fibrillation ye-atrial) ngokwakhiwa kwe-intracardiac yegazi. Ube esengena emithanjeni yengqondo.
Izici zalesi siteleka kushukela sikhula ngokushesha kwezimpawu, ukwanda kwezinkinga ezijwayelekile (ikhanda, ukuhlanza, ukungazi kahle) ngaphezulu kokugxile:
ubuthakathaka baxhashazwe nemilenze ngakolunye uhlangothi lwale umzimba,
izinguquko emasimini wokubuka
Libhekene i ukwanda phakathi izimpawu unhlangothi, impendulo ababuthakathaka yokwelapha, yokutakula kancane imisebenzi elahlekile.
A isikhathi eside, iziguli ezibuthaka isimo, kanye kwegazi ohlelweni bese imicu yezinzwa ubushaye cishe zonke izinhlaka.
Ngakho-ke, izinkinga zivame ukuvela:
imibhede enokuphulukiswa okuhamba kancane, ukutheleleka, ukuthuthukiswa kwe-sepsis (ubuthi begazi),
ukuvuvukala kwamaphaphu, ipheshana lomchamo ngokumelana nokulwa namagciwane,
ukuhluleka inhliziyo ukuminyana yamaphaphu, isibindi edema, ekuqongeleleni uketshezi esifubeni, komgodi ongaphakathi kwamathumbu.
Ukwakheka kwe-vein thrombus ejulile
Thrombus kwetinhlavu ngemithambo ejulile wemikhawulo kubangela ukufuduka lwalo Umthambo yamaphaphu occlusion zakhela emagatsheni awo. Zonke lezi zimo zingadala ukufa kwesiguli.
Ngokuvamile kwenzeka kubantu abanesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophezulu. ingcindezi High uthanda kokubahlubula Umthambo, kumiswa hematomas (inqwaba ebalulekile igazi), egcwele igazi-ingaphakathi ventricular. Ukugxila okunjalo kucindezela ukwakheka kobuchopho, kwenza kube nzima ukuphuma kwamakhaza we-intracerebral, futhi kudala i-edema
Ukuze ukopha cerebral libhekene kuqala okungazelelwe, ukwanda okusheshayo e ikhanda okuvela sokuwa nokulahlekelwa ukwazi kuze kube ikhoma. Iziguli zilahlekelwa imisebenzi enjalo:
amagama aphinyiselwe ngokuzimele,
ukuma endaweni, isikhathi.
Imvamisa akukho ukukhumbula, ukuhlolwa kwangempela kwesimo sabo. Ukuqhekeka kwegazi kungena kuma-ventricles obuchopho kungasolwa uma isiguli:
izinga lokushisa lomzimba liyenyuka
Ukucaca kokuqwashisa ngokushesha kulahleka
avele Ukudlikizela futhi imisipha ukungezwani isiphundu,
kuyingozi kakhulu iyona wedging we oblongata medulla ngesikhathi foramen Magnum, kokucindezelwa ngokufanele therein izikhungo zokuphefumula nekulawulwa inhliziyo. Le nkinga ivame ukuholela ekufeni okusheshayo. Isizathu sesibili njalo imiphumela enqabayo kuyinto kabusha ukopha.
Usizo lokuqala esigulini
Cerebral ukugeleza kwegazi kungenziwa esolwa ezifana izimpawu zokuqala:
lapho uzama ukuphakamisa izandla (amehlo avale), kuqubuka umugqa owodwa,
ukumamatheka "ijika" ngenxa yokufuduka ekhoneni elilodwa lomlomo phansi,
Nasolabial Songa eshelelayo kulolu hlangothi,
amashiya akhuphukela kubude obuhlukile
tu- ulimi kuphambuka umugqa sosizo ukuze ohlangothini,
isiguli asikwazi ukusho ngokucacile igama lokugcina negama lokuqala, igama eliphakathi noma asiqondi okushiwo amagama abhekiswe kuye nakancane.
Ezimweni ezinjalo, udinga ukushayela i-ambulensi ngokuphuthumayo. Kufanele ubeke isiguli endaweni evundlile flat (phansi, embhedeni, phansi). Ngaphansi emahlombe kanye ikhanda buyela umcamelo noma izingubo eligoqiwe. Nikeza ukuhamba komoya okhululekile, ungaqinisi ibhande, izinkinobho ezingaphezulu.
Uma kukhona ukuhlanza ke ematfuba ikhanda ukuze ohlangothini, udinga ukuqinisekisa ukuthi umlomo ususuliwe ubuhlanzo, bebelokhu okufakelwa ekhishiwe. zesifo sokuwa umuntu eqhuma phakathi kwamazinyo aso ukugxambukela into mncane (isib spoon zihambisana iduku). Ukuze ikhanda sisetshenziswa pack ice ngakolunye uhlangothi nasemilenzeni buthaka.
ingozi Special sikashukela ukuthi ukulahlekelwa okungazelelwe ukwazi, ukuquleka kungase kube uphawu lokungabi ikhoma hypoglycemic.
Ngakho-ke, kunconyelwa ukuthi, ngekhono lokugwinya eligcinwe, vumela ucezu ushukela noma isipuni soju ukuthi sichithe. Esimweni esingazi lutho, isixazululo esiphundu esimnandi ngaphansi kolimi sidonswa kwabanesifo sikashukela.
Uma ukutholwa kwengozi ye-cerebrovascular kuqinisekisiwe phambilini, kunconywa ukuthi ugaye amaphilisi ayi-10 e-glycine ubeke i-powder esihlathini noma ngaphansi kolimi. Yonke eminye imishanguzo, kufaka phakathi i-Nitroglycerin, iCorvalol, amaconsi enhliziyo, iphikisiwe.
Ukwelashwa isifo sikashukela
On yokwemukela esibhedlela isiguli inikezwa yokwelapha yezokwelapha olunzulu:
bonke abanesifo sikashukela bakhonjiswa i-insulin (ngokunqenqema noma ngaphakathi), kepha ukuncipha okubukhali koshukela wegazi akunconywa,
amakhambi wokuvikela i-edema yamakhemikhali - i-Mannitol, i-magnesium sulfate noma i-Dexamethasone (kuya ngomfutho wegazi), Diacarb,
angiotensin ukuguqulela enzyme - Enap, Prenesa,
anticonvulsants - diazepam, valproic acid,
izixazululo - Reopoligljukin, nosawoti, Trisol, GIC.
Ngemuva kokuqinisekisa uhlobo lokushaywa unhlangothi, kunikezwa ukwelashwa okuthile. Kwi-ischemia yobuchopho, kunconyelwa:
anticoagulants (anticoagulant) - Tsibor, Fraksiparin (contraindicated ngesikhathi ingcindezi ngenhla 175 mm HG, ikhoma, Ukudlikizela kanye izilonda olubanzi ubuchopho ..)
ama-antiplatelet agents (vimbela ukuxhumeka kwamapuleti) - Aspirin, Plavix, Tiklid,
correctors ingcindezi -. uma aphakeme (amayunithi 180) Enap, Ebrantil ngamazinga aphansi (. kuze kube 120 mm HG) Dobutamine, Reopoligljukin,
ekuthuthukiseni umzimba amangqamuzana obuchopho futhi izinzwa izicubu - Aktovegin, Espa-lipon, Tserakson, Cytochrome.
Nge-hemorrhage, ukuhanjiswa okuyinhloko kokwelashwa ukuvimbela i-edema yamakhemikhali. Kulokhu, iMannitol, i-magnesium sulfate, i-Albumin inqunyelwe. Ingcindezi igcinwa emazingeni ka-130-150 mm RT. Ubuciko. usebenzisa Berlipril, Naniprus kuhlangene Nimotop. Ukubuyisela imisebenzi yobuchopho sebenzisa i-Ceregin, Semax.
Okungaba futhi okungenakuba khona: umsoco, ukunyakaza
Esikhathini esibi sokushaywa unhlangothi, iziguli zisesibhedlela. Emhlabeni ekupheleni kweviki lokuqala kunconywa ukuqala kutivocavoca, ukuthuthukiswa kwamalungu omzimba, massage emnene. Ukwelashwa ngokomzimba kwenziwa ngendlela yokuhamba okuhamba kancane nokushelelayo kuwo wonke amalunga (ukuguquguquka, ukwelulwa, ukujikeleza) ngosizo lwangaphandle ohlangothini oluthintekayo. Kubalulekile futhi ukusiza isiguli ukulala embhedeni ukuvimbela izilonda zokucindezela.
Ukudla ngalesi sikhathi kungangena ngaphakathi ngethambo lesisu. Uma ukugwinya kungaphazamiseki, khona-ke ukondla kwenziwa ngokudla kokufana okungamanzi okufana nolwuketshezi. Ukudla okuhlikiwe kuvunyelwe:
isobho yemifino ne nepepper abilisiwe inyama noma inhlanzi,
puree baby ukudla, imifino (ngaphandle amazambane), izithelo ezingenashukela,
ushizi omusha wekotishi ovela ku-kefir, yoghurt, ubisi ne-calcium chloride (calcined),
ubisi iziphuzo ngaphandle izithasiselo, self-wenza enembako temusho ekhemisi,
compotes (buhle), ayo fresh (ngaphandle yamagilebhisi).
Bukela ividiyo ngomsoco ngemuva kokushaywa unhlangothi:
Ukubhaliswa isikhathi sonke sokutakula ngemuva kokushaywa unhlangothi yilokhu:
ukucindezelwa kwengqondo, ukukhathala okubukwayo, engqondweni nangokomzimba,
ukubhema, utshwala, iziphuzo ezinekhofi,
ukusetshenziswa ushukela, ukudla okunesitashi, nokunamanoni, okuthosiwe noma okunongwe kakhulu izitsha, Navaro inyama, amakhowe, inhlanzi,
usawoti ngokweqile kwimenyu, okusemathinini, ngibhema, nososo ngomumo eyenziwe, ukudla okusheshayo,
ukudla ngokweqile, ukudla okungandile.
Ukudla ngemuva kokuphuma esibhedlela
Ukuze usize umzimba ubuyisele imisebenzi elahlekile, okulandelayo kufanele kube ekudleni:
imifino abilisiwe - cauliflower, broccoli, Ugalonci, zucchini, isitshalo seqanda, ithanga,
isaladi yamatamatisi, amakhambi, ukhukhamba, iklabishi (uma ibekezelelwa), izaqathe ezintsha, izimbiza ezinethisipuni elilodwa lamafutha zemifino,
imidumba - uphizi, ubhontshisi, udali,
okusanhlamvu - okusanhlamvu oats, nokunye okufana nokolweni, quinoa, onsundu, irayisi abamnyama,
ushizi fresh 2-5% fat, kefir, yogurt, elinebhotela,
izifundo zemifino yokuqala
amaprotheni omelet ngombhangqwana (ngesonto avunyelwe 3 amaqanda izikhupha)
abilisiwe inhlanzi, ukudla kwasolwandle, inkukhu noma turkey umucu ukupheka umusi cutlets, meatballs, meatballs,
izithelo ezingafakiwe kanye namajikijolo, amajusi, umhluzi we-rose rose, i-blackcurrant, i-chicory.
Izinto eziningi kungagcini avunyelwe rye isinkwa, amazambane (hhayi iyunithi ezingaphezu kwesisodwa ngosuku), izaqathe abilisiwe beet, ushizi omnene, omisiwe izithelo compote ukuze iphalishi noma izithasiselo.
Ekuphekeni, ungasebenzisi ukuthosa noma ukugcoba ngamafutha. Kunconywe ukupheka obuphelele okusanhlamvu, okusanhlamvu, ehlutshiwe nechobozekile imifino, izithelo. Lena ngakho kunesidingo abangele zokuzikhukhumeza, ikakhulukazi iziguli esembhedeni ngenxa yokugula. Usawoti ungezwa kuphela esitsheni esisele. Imvamisa ukudla kufanele kube izikhathi okungenani 5 ngosuku imali ihlukaniswe.
Imiphumela yokugwazwa kweziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus
Ingozi yokufa kusukela unhlangothi sikashukela ngenhla cishe 4 izikhathi ziqhathaniswa wonkana. Ngomphumela omuhle, isikhathi eside sokuthola kabusha siyaphawulwa. Kubangelwa ukuba khona kwesifo sikashukela:
ukuzwela ongaphakeme ngenxa ukulimala kwenzwa (peripheral sikashukela),
ukuhamba kwegazi eliphansi emilenzeni (izilonda ze-vascular and nerve),
Ukushintsha kwesikhumba okuthikameza ukubhucungwa umzimba, ukuvivinya umzimba (izilonda ezindebe, i-eczema, i-dermatitis),
kunciphise ukuhamba okuhlanganyelayo (arthropathy),
ukuphazamiseka kokunyakaza ngaphambi kokushaywa unhlangothi,
isiyezi, ukungazinzi lapho uhamba,
izifo eziningi ezihlangana.
Ngakho-ke nokuvuselelwa imisiwe, motor umsebenzi kanye nokuzwela ayikwazi benganhlanhlathi ngokugcwele. encephalopathy Kuyatholakala (ubuchopho umsebenzi izinguquko) kwenza kube nzima inkulumo efanele, ngekhanda ulwazi, umsebenzi ngempumelelo engqondo. Zonke lezi zici kuholele post-stroke inkathi isibalo esiphezulu ukukhubazeka nokuphikelelayo ukukhubazeka zezinzwa.
Ngisho ne ekuhlonzweni nasekwelashweni ngesikhathi esifanele, ukwelashwa umnyuziki unhlangothi ngokuvamile sifinyelele ngcono ukwelashwa kuphela. Amathuba wokululama ngokugcwele ancishiswa ngaphansi kwale mibandela:
iminyaka emva kweminyaka engama-50
khona nezinye izinkinga semithambo sikashukela (ukwehluleka kwezinso, imisipha inhliziyo, izingalo nemilenze, i-retina)
isikhathi eside sesi sifo (kutholakele isifo sikashukela iminyaka engaphezu kwengu-7),
amazinga aphezulu we-hemoglobin ye-glycated (ngaphezulu kwama-7-7,5%),
izinyanga ezintathu akukho ukuthuthuka okuqhubekayo kokunyakaza nokuzwela emilenzeni,
Esikhathini lapho kwakukhona i-edema yamakhemikhali, ukoma,
kutholakala ukuthi kune-atherossteosis ebanzi, umfutho wegazi ophikisayo, ukukhuluphala.
Isibikezelo sezulu sezinsuku Okubi ukubhema iziguli ukuba umlutha wotshwala, kanye nalabo abangazange ukulawula phambi indices unhlangothi kwegazi glucose, musa abanamathela esiqinile kwemithetho yokudla, kwaholela ukuphila umzimba.
Ezimweni ezinjalo, kuvame ukuba nemiphumela eyinsalela eqhubekayo - ubuthakathaka bemilenze, ukunyakaza lapho uhamba, ukuwa, isiyezi, nokukhubazeka okubukwayo.
Iziguli zisengozini enkulu yokushaywa unhlangothi ngokwejwayelekile, i-myocardial infarction. Banikezwa imishanguzo njalo - izidakamizwa zokunciphisa igazi, ukwehlisa i-cholesterol, ukuvikela ubuchopho (ama-neuroprotectors). ukuqapha okuqhubekayo yegazi, ukubonisana njalo nge endocrinology futhi isazi sezinzwa, ophthalmologist.
Futhi nakhu okunye mayelana noshukela kwabesifazane.
Stroke sikashukela kungabangela umonakalo eside njalo nesineke. Ukuze kuncishiswe imithelela ukopha olubanzi, ukwelashwa esibhedlela kufanele kuqaliswe kusenesikhathi. Kusuka evikini lokuqala, kuvivinya umzimba, kuboniswe izicubu zomzimba. Amandla mnene, yakheke ikhumbula ukulinganiselwa kwamafutha, carbohydrate elula. Ngemuva kokushaywa unhlangothi, ukuvuselelwa ngokuphelele kuyadingeka.
Ingozi yokuhlaselwa yisifo sikashukela
Ngesifo sikashukela, inani elikhulu le-glucose egazini liyakhiwa. Yena ukudansela isiginci sakhe uketshezi kuyi-plasma yegazi, kunomthelela ukwephulwa yamanzi-usawoti umzimba. Lokhu kuholela ezinkingeni:
ukuqina kwegazi, ukuncipha kokugeleza okuphuma emzimbeni kuhamba ngemithambo kushukela we-mellitus,
ukwehla kokuqina kwemithambo yegazi okuholela ebuthakathakeni,
kumiswa conglomerates glucose ne-cholesterol, okuyizinto iziqukathi esivaliwe,
Uma isiguli alihambisani ekudleni, abakhuluphele, ungathathi-insulin, ekhiqizwa unhlangothi sikashukela. Conglomerates glucose ne-cholesterol ezihambayo ngokusebenzisa izitsha microcirculation ubuchopho clog kubo. Lokhu kuholela ku-necrosis (necrosis) yezicubu zezinzwa.
Ukubuyisela umzimba emuva kokuhlaselwa yisifo sikashukela kunzima. Igazi obukhulu lohlaselwayo, ngakho ukuvaleka isitsha kwenzeka ngokuphindaphindiwe.
Izici zenkathi yesifo sikashukela
Ngo sikashukela egazini ewugqinsi liqukethe esiningi cholesterol, i-glucose, izakhi kwakhiwa. Isimo sikhulu ngokuphelelwa ngamandla, okubangelwa ama-molecule eglue kanye nokuchama okuvamisile. Ngakho-ke, ukugeleza kwegazi ifuna ukuzama kusukela imikhumbi emikhulu ngokufaka ezincane. Ngisho nama-conglomertates amancane we-glucose ahlanganisa i-lumen.
Ukuvuselelwa komzimba ngenxa yezinkinga kuyanda:
okwehlisa izinga lokugayeka kokudla emzimbeni, ngoba okungabanga bikho kuso ukuvuselelwa (kubuyekezwa Ukwakheka yeselula) ka izicubu
ubukhulu bezinto eziphelele ngenxa yokuqothulwa kwama-capillaries amancane,
fragility anda endothelium semithambo, lapho kwephuka lapho sicindezelwe noma uhlevane,
ukwanda komfutho wegazi.
Ukubuyisela isiguli, udokotela ekunika yokwelapha ezimbili ukuqeda imiphumela sikashukela kanye nesifo sohlangothi.
Ukwelashwa kanjani unhlangothi ngesifo sikashukela?
Kunezinhlobo ezimbili zokuthuthuka zokuqina:
ischemic - omncane mafutha anciphisa isikhala esingaphakathi we endothelium, okubangela yokuntuleka kwegazi ingxenye yobuchopho,
haemorrhagic - okuqukethwe endothelial igebe ubuchopho phandle.
Inhloso yezindlela zokwelashwa incike ohlotsheni lwesilonda. Uma kuhambisana glucose kwaphakanyiswa igazi, udokotela sinquma izimali ezengeziwe ukwehlisa izinga.
Ukwelashwa sinzima, ukusebenzisa imithi, amakhambi abantu, Physiotherapy, ekudleni. Izinga lokululama kwesiguli lincike endaweni yesilonda sobuchopho.
Ukuhlaselwa i-ischemic, okuvela ngenxa yezinkinga zesifo sikashukela, nikeza izidakamizwa:
isishoshovu se-plasminogen izicubu, kuqeda ukuhlaselwa,
ama-ejenti abulala i-conglomerate, evimbela ukuhamba kwegazi (ikhombisa umphumela lapho wethulwa ngehora lokuqala ngemuva kokushaywa unhlangothi)
ama-nootropics athuthukisa ukuphuma kwegazi kuye ebuchosheni,
ukulungiswa komthamo we-insulin ukuvimbela ukuhlaselwa kwesibili.
Uma isiguli athuthukile unhlangothi oluhambisana, ukuhlinzwa isetshenziswa akhiphe igazi emiyalezweni yobuchopho. Ngemuva kwalokhu, kunikezwa izidakamizwa ezivimbela ukuhlaselwa kwesibili.
Ngokuhlaselwa yisifo sikashukela, kusetshenziswa ama-ejenti alandelayo:
Odokotela bacebisa ukuhlanganisa imali nomunye, ngezikhathi ezithile befaka izingxenye ezithile. Ukuguqulwa kwendlela yokwelashwa kwesintu kwenziwa njalo ezinyangeni ezi-2-3. Isiza hhayi kuphela ukuqeda imiphumela ischemia, kodwa futhi ngcono uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi, ukuntuleka yezinkinga ukuze retina iso.
Ezinye izindlela zokwelapha azisetshenziswa njenge-monotherapy. Lokhu kungumphumela ongezekile emzimbeni womuntu uma usebenzisa umuthi, i-physiotherapy, kanye nokungenelela kokuhlinzwa.
Ngemuva kokuhlasela kwenzeka, izicubu zomzimba womuntu zilimele. Ukulahleka okungenzeka kokuzwa, umbono, ukukhuluma, ukuhamba kwemisipha. Imvamisa kuba nokukhubazeka komzimba. Ukubuyisela imisebenzi, landela imithetho yokuvuselelwa:
ukusetshenziswa kwemithi enqunywe ngudokotela,
ngenza izifundo zokwelapha ngokuzivocavoca,
yenza izigaba zokwelapha ngomqeqeshi,
Ukudla okuqinile kokushaywa unhlangothi,
uma isiguli sinokuhamba, kwesinye isikhathi kufanele siphume embhedeni, sihambe futhi siphefumule umoya omusha ukuze singalahli ngokuphelele umsebenzi wohlelo lwe-musculoskeletal.
Isikhathi sokuvuselela kabusha sincike kuhlobo lokushaywa unhlangothi, ubungako bomonakalo womzimba, izimpawu ezisetshenzisiwe, kanye nesimo sokusebenza kwengqondo yomuntu. Isiguli kudinga Yiqiniso yezokwelapha ngesikhathi sokusebenza kwengqondo ukuvimbela noma kuqedwe ukucindezeleka.
Imiphumela yokuhlaselwa yisifo sikashukela
Ngemuva kokuhlaselwa, umuntu uba nezinkinga:
kuncishiswe ukusebenza kwezimoto,
ukulahleka kwezicubu zomzimba
izindlebe ezingaboni kahle, umbono (isifo sikashukela), inkulumo,
ukulahleka kwenkumbulo (okugcwele noma okuyingxenye),
izinkinga zesifo senhliziyo (CVD),
ukuthuthukiswa kwezinye izinkinga ezivela kushukela (ukulahleka kombono, isifo senhliziyo, i-thrombosis).
Uma izinyathelo zokwelashwa zingathathwanga ngokuphuthumayo, isiguli sizokufa.
Ukuqeda imiphumela yokuhlaselwa, umuntu kufanele avuseleleke. Udokotela kuphela onquma izindlela zokwelapha noma zokuhlinza. Inketho yesibili ikhonjiswa kubantu abaye babona uhlobo lwe-hemorrhagic yalesi sifo.
Ukuqunjelwa unhlangothi nesifo sikashukela
Izibikezelo lesi sifo incike esimweni lesiguli zempilo, inani izicubu, amafomu yokushaywa unhlangothi, ikhwalithi ukwelashwa. Uma ehlaselwa ingxenye encane izicubu, isiguli ithobela imithetho yokwelapha, isimo sengqondo esiqondile. Umzimba uzolulama ngokuhamba kwesikhathi.
Uma hit by ngisho ingxenye encane izicubu, kodwa le ndoda iyenqaba ukwelashwa - a Izibikezelo abampofu. Uma isifo sikashukela singalashwa, i-ischemia noma i-hemorrhage izophinda ibuye.
Uma iningi layo lithinteka, i-prognosis ayimpofu. Izinga lempilo yomuntu liyawohloka. Inqubo yokuphulukisa kungenzeka ingasizi.
Isifo sikashukela yisifo lapho kuvela ubunzima bezitho zomzimba. Ngokushaywa unhlangothi, kukhona ingozi empilweni yomuntu. Uma kunikezwa imishini yezokwelapha ephuthumayo, umuntu uyakwazi ukulala. Ukubuyisela izicubu kudingeka alandele isikhathi nokuvuselelwa, banamathele inkambo yokwelapha enqunywe udokotela.
Ukudla Kwesifo Sikashukela Ngemuva Kokushaywa Unhlangothi
Ngenxa izinkinga ezingaba khona nge singagwinyi isisulu sidinga ukudla liquid efudumele. Izinhlamvu zobisi zifanelana nale ncazelo kahle. Ungasebenzisa zonke izinhlobo zamabele, ngaphandle kwe-semolina.
Akha ingxenye enkulu ekudleni ngokushesha ngemuva sigameko kanti ngesikhathi nokuvuselelwa. Izinhlobo eziphambili lapho ungasebenzisa umkhiqizo wezitshalo ngalesi sikhathi:
Raw kodwa esithambile futhi oqoshiwe (kanye izithelo), ngesimo isaladi - usuku ngalunye.
I imibengo isobho imifino, ngezinye izikhathi kulekelelwa inkukhu umhluzi.
Ama-Casseroles kanye ne-stew.
Kunoma isiphi isamba futhi kuvunyelwe nsuku zonke:
Isitshalo seqanda ne zucchini.
Izaqathi (kunconyiwe eluhlaza njengengxenye yesaladi).
Ngezikhathi ezithile ezifakwe kwimenyu zivunyelwe:
Ukudla kwasekuseni - ebilisiwe iphalishi elincanyana ebisini kusuka ku-amabele noma i-oatmeal ngokufakwa kwezithelo ezomisiwe, 1 ibhanana kanye nenkomishi yetiye.
I-2nd zk - ushizi wekotishi onamafutha amancane, oxutshwe esimweni esingamanzi esine-yogurt, ingilazi yejusi elithambekele okusha.
Isidlo sasemini - isobho lezinhlanzi elosiwe nemifino, okusanhlamvu nesalmoni epinki, i-berry jelly.
Umthamo - isaladi imifino zonyaka, sichotshozwe a grater indawo waphuzisa ngamafutha yemifino kanye kalamula.
Dinner - kancane nokunye okufana nokolweni uyiphekwa ne utamatisi sauce futhi inkukhu meatballs steamed, izithelo iyisitshulu ngaphandle ushukela.
2 amahora ngaphambi kokulala, uvunyelwe ukuphuza i-1 st. kefir.
Imikhiqizo Yesifo Sikashukela Esigunyaziwe futhi Evinjelwe
Ukucutshungulwa okudla okuvela ekudeni ngemuva kokuhlaselwa yisimo, kuvunyelwe ukusebenzisa i-stewing emanzini, i-steam. Imifino ye-coarse fiber kufanele ichotshozwe futhi ibiliswe ukuze ingabangeli buhlungu futhi iqhume amathumbu.
Izitsha zokuqala zilungiswa ngendlela yesobho lemifino enoshukela, imifino, amakhambi, is borsch nesobho seklabishi kulungiswa kusuka emifino emisha, kanye ngesonto, imenyu kungenzeka ibe isobho kumhluzi wenkukhu wesibili.
Isinkwa sivunyelwe grey, rye, ngokufakwa kwe-oat noma i-nokunye okufana nokolweni, okusanhlamvu okuphelele. Njengoba ufulawa omhlophe uvusa ushukela wegazi, noma yikuphi ukubhaka, isinkwa esenziwe ngofulawa weprimiyamu asisetshenziswa ekudleni kweziguli ezinesifo sikashukela.
Ezifundweni zesibili, izitsha ezinjalo kanye nemikhiqizo kunganconywa:
Izinhlanzi: ifakiwe kwimenyu nsuku zonke, kukhethwa izinhlobo ezingewona amafutha - i-pike perch, i-saffron cod, i-pike, i-river bass, i-cod. Ungapheka kanjani inhlanzi ukuze ibe noshukela ongcono kakhulu? Imvamisa, inhlanzi ithungwa etafuleni ngetinhlavu letibilisiwe, letiphilisiwe, letibhakiwe noma letibhidvo tenyama, tincetu temoya.
Ukudla kwasolwandle kuyasiza njengomthombo we-iodine ukuze i-cholesterol yegazi ingakhuphuki. Izitsha zilungiswa kusuka kumassels, shrimp, scallop, squid, sea kale.
Amaqanda: abilisiwe-okuthambile kungabi ngaphezu kwezicucu ezi-3 ngesonto, i-omelet yamaprotheni umbhangqwana ingaba kwimenyu nsuku zonke.
Inyama isetshenziswa kaningi kunenhlanzi. Ungapheka inkukhu ne-turkey ngaphandle kwesikhumba namafutha, inyama yenkomo, unogwaja.
Izitsha eziseceleni ezinobumba ziphekiwe kusuka ku-buckwheat ne-oatmeal, ezinye izinhlobo azisetshenziswa kaningi. Ngamabele okusanhlamvu ngokweqile ekwakhiweni kwesitsha kungaba kanye kuphela ngosuku.
Imifino ebilisiwe iphekiwe, kanti kunganconywa ama-casseroles nama-stew steward. Ngaphandle kwemikhawulo, ungasebenzisa i-zucchini, utamatisi omusha, ukholifulawa, i-broccoli, isitshalo seqanda. Ngokujwayelekile, ungadla uphizi oluhlaza, ubhontshisi kanye nethanga. Kungcono ukufaka izaqathe ekudleni okuluhlaza, kufana nesaladi. Isaladi yemifino eluhlaza kufanele ibe kumenyu nsuku zonke.
Imikhiqizo yobisi ikhethwa ngokuqukethwe okunqunyelwe kwamafutha. I-Kefir, iyogathi neyogathi ziyasebenziseka ikakhulukazi. ISerum iyasiza futhi kushukela wohlobo 2.
Imikhiqizo yobisi olu-Sour kufanele ibe musha, mhlawumbe kuphekwe ekhaya kusetshenziswa amasiko aqalekayo. Ushizi we-Cottage ungaba ngamafutha ama-5 noma ama-9%, ngawo amakhekhe ushizi kuphekwe kuhhavini, ku-casseroles, kophudingi kuma-sweeteners. Ushizi omnene uvunyelwe.
Njengoba iziphuzo, itiye le-herbal, umhluzi we-rosehip, i-chicory, kubalwa ngokufakwa esikhundleni sikashukela kusuka kuma-blueberries, ama-lingonberry, ama-cherries, ama-apula, kanye nejusi kubo okungadluli i-100 ml ngosuku abavunyelwe.
Ukusuka kumenyu yesifo sikashukela ngemuva kokushaywa unhlangothi kufanele kungafakwa:
Ushukela, ujamu, amaswidi, uju, u-ayisikhilimu.
Amafutha okupheka, imajarini.
Ikhofi netiye elinamandla, zonke izinhlobo zikashokoleti, cocoa.
I-Semolina, ilayisi, i-pasta, amazambane.
Ukudla okuhlanganisiwe, ukhukhamba, inyama ebhemayo.
Izinhlobo ezinamafutha zenyama, inhlanzi, imikhiqizo yobisi.
Turnip, isithombo, isithombo, amakhowe, sorrel, isipinashi.
Kuvinjelwa okuyisigaba kwe-vascular pathology ku-mellitus yesifo sikashukela kufakwa kuma-hamburger nakwizitsha ezifanayo, ukudla okulula, izigaxa ezinamakha, izicubu, iziphuzo ezimnandi zekhabhoni, kanye namajusi ahlanganisiwe kanye nemikhiqizo engapheli. Ngeke zisetshenziselwe ukondliwa, noma ngabe kufinyelelwa ngokujwayelekile ushukela kanye ne-cholesterol. Ividiyo ekulesi sihloko izokutshela ukuthi wenzeni ngokuhlaselwa yisifo sikashukela.
Umsoco wokuhlaselwa yisifo sohlangothi kanye nesifo sikashukela kuhloswe ngaso ukuvuselela i-metabolism kanye nokuvimbela ukuqhubeka kwe-atherosclerosis. Kuthuthukisa i-prognosis kanye nokujwayelekile kwesisindo somzimba.
Ezinsukwini zokuqala zesimo esibi, isiguli sinikezwa kuphela ukudla okulu-ketshezi, njengoba ubunzima bokugwinya. Ezimweni ezinzima ,guqukela ekusetshenzisweni kwe-probe ekhethekile.
Isobho elinemifino ngaphandle kwamafutha.
Izithelo nezithelo zemifino yezingane.
Izingxube ezilungele izingane.
Lapho umsebenzi wokugwinya ubuyiselwa, ukudla kuyanda. Izitsha ezivunyelwe kuphekwe ngaphandle kokuthosa nosawoti ngendlela evamile noma ebhuthini ephindwe kabili, amasaladi avela kwimifino nezithelo.
Nakani! Kunomkhawulo ezilwane, ama-carbohydrate ngokushesha ugxile, kunciphisa okuqukethwe ikhalori jikelele. Ama-broths nosawoti ngokuphelele noma cishe ngokuphelele akukho kwimenyu yesiguli.
Lapho ukhetha imikhiqizo, ukunakwa kudonswa kulabo aqukethe i-potassium, magnesium, lipotropics ebuyisela i-lipid metabolism. Ushizi we-cottage shizi, amantongomane, ukudla kwasolwandle. Umzimba osindayo kufanele uthole izakhamzimba ezanele ukuze ubuye uthole amakhono.
Ukudla kuxubile, okungenani izikhathi ezi-5 ngosuku ngezingxenye ezincane. Uma umfutho wegazi uvamile, ngokuhamba kwesikhathi bavumela ukufika ku-10 g kasawoti ekudleni, uma kwenzeka kuphezulu - akukho ngaphezu kwe-5 g.
Esikhathini sokululama, kubalulekile ukuthi umuntu onesifo sikashukela alandele imithetho ukuze iziphazamiso zihambe futhi nengozi yokuphinde ube mncane incane:
Yekani ukubhema uyeke utshwala.
Njalo qapha ukugcwala kwe-cholesterol egazini, ngokunakekelwa okukhethekile - i-LDL, yehlise ngesikhathi uma uphawu luphakama. It ukhonza njengelungu ukubaluleka Umhlahlandlela 100mg / dl, awokuthi ukuphinda unhlangothi - 70.
Ungasinaki noma ungasinaki izeluleko nemiyalo kadokotela oholayo, landela konke okunqunyelwe ekudleni nasekwelashweni.
Ngendlela efanele ukukala ingcindezi bese ubheka izinguquko zayo.
Lapho unquma i-aspirin, ungakhohlwa ukuyiphuza nsuku zonke ku-dosage echaziwe.
Ukudla okukhethekile kweziguli ezinesifo sikashukela esilulazekayo kunesimo sokuphulukisa futhi kusiza isiguli ukusondela ezinyaweni zakhe ngokushesha okukhulu. Ukuqokwa kodokotela kuqinisekisa ukuthi lolu hlelo luhlangabezana nezindinganiso futhi lithela izithelo, lusheshisa ukuvuselelwa kwabantu kabusha. Esikhathini sikashukela, inqubo ekhethekile yokudla okunempilo iyadingeka, futhi ukugcinwa kwayo kukuvumela ukuba wesabe kakhulu ukuthuthukisa izinkinga ngokunikezwa kwegazi ubuchopho, futhi kusize ukubuyela empilweni ejwayelekile.
Izici Zobungozi Zesifo Sikashukela
Isifo sikashukela yisimo esivamile. Ngakho-ke, i-pathology eyethuliwe kathathu yandisa amathuba wokuphazamiseka kwegazi. Izici zobungozi ngabachwepheshe zihlukaniswe ngokungashintshi futhi ezingashintshwa. Okwakuqala ngeke kuthonywe kunoma iyiphi indlela engathi sína; eyokugcina ayikwazi. Izici zobungozi ezingafakiwe zibandakanya:
iminyaka - ngemuva kokufinyelela eminyakeni engama-55, ubungozi bokukhipha i-hemorrhage lenyuka ngo-50%,
ubulili - amadoda anethuba elingaphezu kwamaphesenti angama-30 lokuba nesifo sohlangothi,
ifa - ngokuvamile imvamisa ukuthambekela kokukhipha isisu kudluliselwa ngomugqa womama.
Isifo sikashukela kanye nokushaywa unhlangothi kungaxhunyaniswa ngenxa yezici ezishintshashayo, ngokwesibonelo, umfutho wegazi ophakeme. Njengoba-ke kwaziwa kahle ngenxa umfutho ophakeme kukhulisa ematfuba hhayi kuphela unhlangothi kodwa futhi kokuhlaselwa yisifo senhliziyo. Ezinye izinto zibandakanya ukulimala kwangaphambilini, ukukhuluphala, izifo zenhliziyo ezi-coronary, ukungasebenzi kahle kwe-lipid metabolism. Izici ezingabeka engcupheni zesifo sikashukela zifaka i-stenosis yemithambo ye-carotid, ukuhluleka kwenhliziyo, i-nicotine kanye nokuxhomekeka kotshwala kanye nezimo eziphindaphindayo ezicindezelayo kanye nezinga eliphansi lomzimba.
Ukushaywa unhlangothi akuvamile ukubonakaliswa kanyekanye ngezimpawu eziningana. Njengomthetho, umuntu onesifo sikashukela unokukhubazeka komzimba ngokuzumayo (komzimba noma kobuso), okuyisibonakaliso esiyinhloko kwabaningi. Kodwa-ke, empeleni, izimpawu zihluka kakhulu, kepha ngenxa yesimo esejwayelekile sesifo sikashukela, abakunaki lokhu. Sikhuluma umuzwa ubuthakathaka, ukungabi namizwa ebusweni, emikhawulweni (ngakwesokudla noma ngakwesobunxele).
Isifo sikashukela kanye nesifo sohlangothi kungase kuhambisane ekulahlekelweni kwamandla ukulibiza nokuqonda lulwimi lolukhulunywa nezinye. Kuyefana nasendleleni eziya ziba zimbi amakhono engokwengqondo bekhanda eqinile ngaphandle kwesizathu. Izimpawu zifaka:
ukufiphala okubukhali kokusebenza kokubonakalayo, okuphawulwe ngamehlo noma amabili
ukuhlangana okuyinkinga kokuhamba,
ukulahleka kwebhalansi nesiyezi,
ukungakhululeki okungajwayelekile, ubunzima bezama ukugwinya amathe,
ukulahlekelwa okwesikhashana ukwazi.
Inkambo ephelele yokuthola kabusha izosiza ukuqeda lezi zimpawu futhi igweme ukuthuthukiswa kwezinkinga.
Ukwelashwa ngokuhlaselwa yisifo sikashukela
A sikashukela oye washaywa unhlangothi, kubalulekile ngokushesha ngangokunokwenzeka ukuletha labagula. Uma kungaphansi kwamahora ayisithupha kudlulile selokhu kwaqala i-pathology, khona-ke nge-ischemic stroke, kwenziwa i-thrombolytic therapy. Kumayelana nokufakwa kwezidakamizwa ezincibilikisa izingqimba zegazi. Nge-hemorrhagic hemorrhage, uma bekungaphezulu, ukuhlinzwa okuphuthumayo okuhloselwe ukususa i-hematoma kungenzeka.
Ekwelashweni kwezidakamizwa kwesifo sikashukela i-mellitus, izigaba ezahlukahlukene zemithi zingasetshenziswa, ngokwesibonelo, abalungisa umsebenzi wokujikeleza emithanjeni yengqondo (Fezam). Ama-Nootropics (Piracetam), ama-antiplatelet agents (Heparin) nama-antiplatelet agents (Aspirin) asetshenziswa. I-Stroke nayo ingalashwa ngama-antihypoxants (Mildronate) kanye ne-angioprotectors (Cerebrolysin).
Kufanele kubhekwe kakhulu ekuzivocavoca ngokwelashwa. Uma zingekho izingqinamba, kunconywa ukuthi uyiqale ngokoqobo ngosuku lokuqala ngemuva kokushaywa unhlangothi. Kunakwa ngokukhethekile ekunakekelweni kwesifo sikashukela.
Ukudla ngokuhlaselwa yisifo sohlangothi kanye nesifo sikashukela kunganciphisa ukuguquguquka kweshukela nezinkinga ezihambisana nokujikeleza kwezitho zomzimba. Izici zokudla kufanele zibhekwe:
ukondla oku-ketshezi esigabeni esibuhlungu, isidingo esichazwa ngokugwinya okwandisiwe kwisifo sikashukela,
ukondla okungenzeka ngokuphenya ngezindlela ezinzima ze-pathology,
ukufakwa kumenyu yesobho elibunjiwe lemifino kanye namapharagi obisi, iziphuzo zobisi olunoshukela, i-baby puree (engenashukela). Izingxube ezilungiselelwe zomsoco zingasetshenziswa.
Ngemva unhlangothi sikashukela, uma isiguli futhi saba nethuba ukugwinya ukukhetha ukudla ukunwetshwa. Nokho, kumelwe ukudla okuphekwe asanda walungisa ngaphandle kwalokho kasawoti kanye nezinongo. Imikhiqizo equkethe i-cholesterol kufanele ingafakwa kwimenyu.
Kuzoba okulungile kakhulu ukudla ukudla okugcwele usawoti we-magnesium ne-potassium. Okufanayo kusebenza kwizakhi ze-lipotropic ezenza ukuthi umzimba ube namafutha emzimbeni. Ukudla okunempilo okunjalo kungukudla kwasolwandle, kanye noshizi wekotishi namantongomane.
Ukudla okunempilo ngemuva kokushaywa unhlangothi kwisifo sikashukela kufanele kube nenani elifanele lamavithamini, i-fiber kanye namafutha acid.
Zonke zifakiwe kumnqumo weminqumo neminye imifino.
Amaresiphi wesifo sikashukela ngemuva kokuhlaselwa
Ama-diabetes angapheka isobho senkukhu. Ukuze lokhu batheleka pan ezimbili amalitha amanzi futhi uwulethe ngamathumba. Ngemva kwalokho, u-anyanisi, amazambane kanye izaqathe ukugeza Imi ku, aphonse amanzi abilayo. Ngemuva kwalokho uzodinga:
Hlanza kahle i-buckwheat bese ungeza esitsheni sokupheka,
inkukhu (ngaphandle ikhasi caloric) Imi ku izingcezu portioned. Fry kancane kancane kuzo zonke izinhlangothi elincane lamafutha (ngokwesibonelo, umnqumo) bese ungeza emifino,
khona-ke kusala ukuletha umhluzi ukulungele.
Ukuze wenze ukondleka ngokuhlaselwa yisifo sikashukela kanye nesifo sikashukela kube lusizo ngangokunokwenzeka, imifino ebunjiwe ifakwa ngokushesha ngaphambi kokudla.
Enye indlela ewusizo yokuthola isifo sikashukela oke waba nesibindi sokopha isaladi yasolwandle. Ukulungiselela kwayo, izaqathe zibilisiwe, zithwetshiwe, zisikwe zibe yimichilo, noma zikhethwe ku-grater enkulu kunazo zonke. Anyanisi nahlanza kusukela husk kanye Imi njengoba fake ngangokunokwenzeka. Ngokulandelayo, ukhula lwasolwandle luhlanganiswa nezaqathe kanye no-anyanisi, oluyoliswe ngamafutha zemifino, uma kunesidingo, sebenzisa usawoti. Manje iresiphi sokudla okwehla esiphundu abanesifo sikashukela uthayiphe kungase kubhekwe 2 njengoba ngomumo ngokugcwele ukusetshenziswa.
Imiphumela yalesi sifo
Uma isifo sohlangothi siqala ngesifo sikashukela, isifo sokuxakile ngeke sibe kuhle. Imiphumela esemqoka kufanele sithathwe njengehlelo ukukhubazeka kanye paresis ezihlobene iziyaluyalu acute ukunyakaza. Ezimweni eziningi, zingama-unilateral (hemiplegia). Sikashukela ingakha kokunikezwa kwe-apharathasi vocal, eziya ziba zimbi inkumbulo.
Olunye ushintsho lwe-pathological lubandakanya ukwehla okuvela eceleni noma kwezinhlangothi ezimbili zemisebenzi ebonakalayo, ukuqina kokusebenza kwengqondo, kanye nezinguquko zobuntu ezihambisana nokuphazamiseka kwengqondo. Noma yiziphi izinkomba zezinkinga akufanele zishaywe uchwepheshe, kanti abanesifo sikashukela akufanele bazitholele bona.
Ukuvimbela ukuphazamiseka kokujikeleza kwengqondo kusho ukungafakwa kwezimbangela eziyinhloko nezesekondari. Okokuqala, lokhu ukuvimbela ukwakheka kwe-atherossteosis. Inconywe ngu:
ukuqapha njalo kwesilinganiso se-cholesterol egazini,
ukusetshenziswa kwezidakamizwa ezokwehlisa i-lipid njengoba kuchaziwe yi-endocrinologist, uma kuphazamiseka kwatholakala iziphazamiso ze-lipid metabolism.
Ukuzivocavoca okuqhubekayo kunconyelwa ukuvikela ukukhuluphala, ukuqhubekela phambili kohlobo 2 lwesifo sikashukela kanye nomfutho wegazi ophakeme. Kubalulekile ukuyeka ukubhema, okukhuphula amathuba okuhlakulela i-pathologies yenhliziyo, isifo sokuqina kwemithambo yegazi.
Isifo sikashukela sinconywa ngokuqinile ukulawula, ukuvimbela kanye nokwelashwa okufika ngesikhathi kwe-hypertension kanye nezifo zegazi okuholela ku-thrombosis. Akunasici esibalulekile ukuthi ulwe nezimo ezicindezelayo. Kufakazelwa ukuthi laba bakamuva bandisa kakhulu amathuba okuba nesifo sohlangothi lwe-ischemic noma i-hemorrhagic.